डिसेम्बर 25, 2019 डिसेम्बर 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments क्यान्सर, डा. राम बहादुर बोहरा
कुनै पनि रोग लाग्नुको प्रमुख कारक तत्व भनेको खानपिन प्रमुख रहेको हुन्छ । जब हामीले यस्ता विषयवस्तुमा चासो नदिएको अवस्थामा हामीलाई अनेक रोग लाग्ने सम्भावना बढेर गएको हुन्छ । हामीले खाने हरेक वस्तुमा निगरानी आवश्यक छ ।
रोग लाग्नुको पछि अर्को प्रमुख कारण भनेको आवश्यक भिटामिनको कमि हुन सक्छ । हाम्रो खानामा बढी भिटामिन भएका खाना खानाले पनि दिर्घ रोग र क्यान्सर जस्ता रोग लाग्नबाट बचाउन सक्ने देखिएको छ । आफुलाई कुनै भिटामिन कम भए नभएको जानकारी डाक्टरको सल्लाह तथा परामर्श लिएर उपचार गर्नु राम्रो हुनेछ ।
आजको लेखमा हामीले क्यान्सर लगायत अन्य दिर्घ रोग नहोस् भन्ने चाहना हुनेहरूका लागि महत्वपूर्ण जानकारी पस्कन गइरहेका छौं । राम्रोसंग पढेर फाइदा उठाउनु हुने नै छ भन्ने आशा लिएका छौं ।
क्यान्सरबाट बच्न यस्ता खानेकुरा कमसे नखाने
१. भुटेका तारेका खानेकुरा
तारेको खानेकुरा बढी खाइयो भने शरीरमा एक्रिलामाइड नामक तत्वको सञ्चय बढ्छ, जसले क्यान्सर लगाउनेसम्मको जोखिम बढाउँछ ।
२. रातो मासु
सुंगुर र खसीको फलमासु खान मज्जा आउँछ । तर, यस्तो रातो मासु बढी खाने गर्नाले क्यान्सर लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ । रातो मासु दिनमा १४० ग्रामभन्दा बढी खानु हुँदैन ।
दिनमा ६ ग्रामभन्दा बढी नुन खानु हुँदैन । नुन बढी खाने गर्नाले उच्च रक्तचाप र हृदयाघातको मात्र नभई क्यान्सरको जोखिम पनि बढी हुन्छ ।
४. रक्सी तथा चुरोट
रक्सीको लत लागेको छ भने दुई पेगभन्दा बढ्ता नखाने गर्नुस स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । त्यसै चुरोट खाने मानिसलाई फोक्सोमा क्यान्सर हुने सम्भावना बढि हुन्छ ।
५. रक्सी बढि खानेलाई
बढी रक्सी खाने गर्नाले मुख, पाठेघर र स्तन सम्बन्धी क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ ।
स्वास्थ्य रहन खानुपर्ने खानेकुराहरु
हामीले पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त भोजन गरिरहेका छैनौं भने शरीरका लागि आवश्यक भिटामिन, खनिज लगायत पोषक तत्वको सप्लिमेन्ट खानुपर्ने हुनसक्छ । पोषण नपुग्दा पनि हामी चाँडै बिरामी हुन सक्छौं ।
एनर्जी ड्रिंक्सजस्तै केराले पनि धेरै ऊर्जा दिने पत्ता लागेकाले विहान २ कोसा केरा नित्य खानाले स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा दिनेछ ।
रोगवाट बच्न खानुपर्ने खानेकुराहरु
एक कप मनतातो पानीमा पुदीनाका केही पात हाल्नुहोस् । पेटको बोसो कम गर्न पुदीना यो उपाय निकै प्रभावकारी हुन्छ ।
स्याउ खाएर आफ्नो बढिरहेको बोसोलाई तपाईं घटाउन सक्नुहुन्छ । स्याउमा पोटासियम हुन्छ जसले धेरैबेरसम्म भोक लागेको महसुस हुँदैन जसले तौल कम गर्न मद्दत गर्दछ । स्याउको नियमित सेवन गर्ने महिलाको सेक्स हर्मोन सक्रिय हुने हुनाले सेक्स चाहना कम हुने महिलाले नियमित स्याउ खानु राम्रो हुनेछ ।
बेसार पनि लसुन जस्तै प्राकृतिक एन्टी बायोटिक भएकाले हाम्रो खानामा समावेश भएको हुन्छ । यसले पनि रोग लाग्नुबाट बचाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसले पनि क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्दछ ।
नोट : तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई सेयर गर्नुहोला । तपाईको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
← मानव स्वास्थ्य र जडिबुटीको आवश्यकता
तपाईको सास कहिलेकाही अचानक रोकिए के गर्ने ? सीपीआर भनेको के हो ? →
नोभेम्बर 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1